မော်ကွန်းတိုက်ကုန်တင်ရထား - rayhab
တစ်နှစ်617 Adana Mersin ရထားမရဏဆီသို့ဦးတည်
Adana-Mersin ကုန်တင်ရထားမတော်တဆမှုအတွက်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်သားများပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကွယ်လွန်သွားသူကို617 ကလူသည်ထင်ရှားနေစဉ်ပျက်ကျ၏ဆီးရီးယားပဲ့တင်သံတွေတင်ဆောင်လာသောအဆိုပါအာကာသယာဉ်၏သမီးကညာကိုခရီးစေသည်။ တစ်ဦးကုန်တင်ရထား၏ Adana-Mersin အချိန်တန်းဖြတ်ဆီးရီးယားစိုက်ပျိုးရေးခဲ့ကြသည်စေသည် [ပို ... ]
ကုန်တင်ရထားနှင့်သြစတြီးယားခုနှစ်တွင်ကား Collider,2သေ
တစ်ဦးကုန်တင်ရထား၏မြို့အနီးရှိအဆင့်ကိုကူးဖြတ်သန်းသြစတြီးယားရဲ့ Styrian Wildon Neudorf Bei ချိတ်ဆက်ထားပြီးလူတို့သည်မိမိတို့အသက်ဆုံးရှုံး2ကားတစ်စီးနဲ့တိုက်မိ။ အဆိုပါ Styrian ပြည်နယ်ရဲကလုပ်စာဖြင့်ရေးသားထုတ်ပြန်ကြေညာချက်မှာတော့ Neudorf Bei Wildon ၏မြို့မှာအသွားအလာကူး [ပို ... ]
MHP Mersin လက်ထောက် Lightning လုံးကိုအဆင့် Crossing အတားအဆီးရှိသည်ဖို့လိုခငျြ
အဆိုပါ Yenice MHP Mersin Mersin လက်ထောက် Baki Lightning ဘေးအန္တရာယ်နောက်ဆုံးတော့အားလုံးတန်းလက်ဝါးကပ်တိုင်အတားအဆီးဟုမေးစေသောအရာရထားမတော်တဆမှုပြီးနောက်။ Mersin ဆီးရီးယားစိုက်ပျိုးရေးလုပ်သားများအတွက်အတားအဆီးမရှိဘဲအဆင့်ကိုကူးအတိတ်နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်ကာလတင်ဆောင်လာသောအဆိုပါကုန်တင်ရထား [ပို ... ]
တာရှုမွို့ 1 လူတွေအတွက်လွန်းဗန်ပေါ်ကုန်တင်ရထား၏တိုက်မှု၏ရလဒ်အဖြစ် Mersin ကလူဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်မိုးသည်းထန်စွာ38 သေဆုံးခဲ့သည်။ မတော်တဆကင်မရာတွင်ထင်ဟပ်။ 12 မှာမနေ့က: Yenice အတွက်အဆင့်ကိုကူးကနေအမိန့် LZ 00 ပန်းကန်မီနီဘတ်စ်အတွက်လယ်ယာလုပ်သားများတင်ဆောင်လာသော 63 951 [ပို ... ]
Mersin အတွက်စေ့စေ့စပ်စပ်ဟာဗန်ရထားလမ်းစိုက်ပျိုးရေးလုပ်သားများကိုကူးပဲ! သေလွန်သောသူတို့သည် 1,4ဒဏ်ရာရ
Mersin ရဲ့တာရှုမွို့ခရိုင်, အဆင့်ကိုဖြတ် 63 951 LZ-ချထားတဲ့ဗန်မှာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်သားများတင်ဆောင်တဲ့ကုန်တင်ရထားဝင်တိုက်ခဲ့သည်။ မတော်တဆမှုများတွင်ကနဦး 1 လူများအဆိုအရ xnumx ရဲ့မိုးသည်းထန်စွာ2ကလူဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်ရှိသော်အနိစ္စရောက်လေ၏။ Yenice ရပ်ကွက်အတွင်း၏ Mersin ရဲ့တာရှုမွို့ခရိုင်ယနေ့ [ပို ... ]
Malatya အတွက်ကွဲကွာ Wagon ရထားကနေဆေးရုံကဆင်းဘရိတ်, hit-the ဗလာလှည်းဖြုတ်ချခဲ့သည်
Hekimhan Malatya ၏ခရိုင်, ထိုသတ္တုရိုင်းဝန်ကိုထမ်းရွက်ရထားတူရကီပြည်နယ်မီးရထားပို့ဆောင်ရေးအဖြစ်အမှတ် 53071 လှည်းပါဝင်ပါသည်, ခေါငျး Hekimhan လွတ်လှည်း garda စောင့်ဆိုင်းထိဘူတာမှထွက်ခွာပါကဖြုတ်ချခဲ့သည်။ အဆိုပါမတော်တဆမှုမိုးသည်းထန်စွာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနှင့်အတူရထားလမ်းလှည်းများတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ မွန်းတည့်အချိန်မတော်တဆ, [ပို ... ]
Çerkezköyကျိုး -Silivri အတွက်သွင်ပြင်လက္ခဏာကုန်တင်ရထား၏ Axles ။ ပျက်စီးနေရိုးရထားစက်လုပ်သမားအခက်အခဲမှောက်သဲတင်ဆောင်သည့်လှည်း၏တဦးတည်းရပ်တန့်ကြောင်းသဘောပေါက်။ နာရီဆန့်ကျင်နံနက်ယံ၌သောကြာနေ့, ဧပြီ 12 03.00 ပေါ်တွင်လက်ခံရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရ Çerkezköyအဆိုပါ -Silivri ကနေလမ်းအကွာအဝေး [ပို ... ]
အမျိုးသားရထားစနစ်စမ်းသပ်ရေးစင်တာကတနှစ်အဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည် URAYS 3
Eskişehir Anadolu တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာ အရုဏ် Ertan Çomaklı, Eskişehir Alpu ခရိုင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရထားစနစ်များစမ်းသပ်ခြင်းနှင့်သုတေသနစင်တာ (URAYS ငါ) မှာတည်လိမ့်မည်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုပေး၏။ အဆိုပါအမျိုးသားကသမ္မတ Recep Tayyip အာဒိုဂန်Eskişehirမီးရထားစနစ်များနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းအတွက်ထုတ်ပြန်ကြေညာ [ပို ... ]
TCDD ပို့ဆောင်ရေး 2019 တစ်နှစ်တာဝန်ဆောင်မှုသင်တန်းစတင်နေပြီ
ပို့ဆောင်ရေး TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာ Erol Arikan, မတ်လ 2019 25 အပေါ်အဖှဲ့အစညျး၏ 2019 တစ်နှစ်တာဝန်ဆောင်မှုသင်တန်းအစီအစဉ်၏ဖွင့်ပွဲလုပ်လေ၏။ အဖွင့်မိန့်ခွန်း Arikan ခုနှစ်တွင်; ဇန်နဝါရီလ 01 2017 င်း၏အရင်းအမြစ်များ, အစီအစဉ်များ, ပရိုဂရမ်သည့် နေ့မှစ. နှင့်ဘတ်ဂျက်နှင့်အတူ၎င်း၏လှုပ်ရှားမှုများဆက်လက်လုပ်ဆောင် [ပို ... ]
ဒိန်းမတ်အတွက်အစာရှောင်ရထားမတော်တဆ, 8 သေ
ဒိန်းမတ်အတွက်နယူးဇီလန်နှင့် Funen ၏ကျွန်းများချိတ်ဆက်ဂရိတ်ခါးပတ်တံတား (ဂရိတ်ခါးပတ်တံတား) ကရထားမတော်တဆမှုပေါ်တွင်အသေခံသောသူသည် 8 လူတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ လူတို့သညျ၏ဘဝအပါအဝင်ဒိန်းမတ်ရဲ, စုစုပေါင်းထိုမိန်းမသည် 5,38 ၏လူများ, kaybettiig ကဆိုသည်။ ကာဇန်, [ပို ... ]
မတော်တဆမှုအတွက်5ကလူဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကြောင်း Denizli စီးပွားဖြစ်မော်တော်ယာဉ်တိုက်မှု၏ Kaklik ရပ်ကွက်အတွင်း Honaz ခရိုင်အတွင်းရှိမယ့်အဆင့်ကိုကူးမှာကုန်တင်ရထားနှင့်အတူ။ ရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များ Denizli, တာကနိုင်ငံတော်မီးရထားရထားပို့ဆောင်ရေး၏ Kaklik ရပ်ကွက်အတွင်း Honaz ခရိုင်အဆိုအရ A.Ş. [ပို ... ]